Kedu ka esi esi kee mmiri mmiri? | Netwọk Mgbasa Ozi
You hụtụla hose mmiri? "Funnels" ndị a na - apụta n'igwe ojii Cumulonimbus nwere ike iju ihe karịrị otu na ihe karịrị abụọ anya ma ọ bụrụ na ọ ga - eme ma ị na - agagharị n'oké osimiri.
Ma, ị̀ ma otú e si akpụ ha? Anyị ga-agwa gị.
1 Dị mmiri hoses
2 Ebee ka ha hiwere?
3 Mmebi nke hoses nwere ike ịkpata
Dị mmiri hoses
Mmiri mmiri, ma ọ bụ mmiri mmiri dị ka a makwaara ya, nwere ike ịbụ ụdị dị iche iche abụọ: akwa iyi ma ọ bụ enweghị akwa.
Tornadic: dị ka aha ha na-egosi, ha bụ oké ifufe na mmiri. Ka ha pụta, ọ dị mkpa na a oké ike eletriki ifufe sitere a supercell na-guzobere. Ha bụ ihe omimi nke ihu igwe, ebe ọ bụ na oke mmiri ozuzo na-esitekarị na ala, ebe ọ bụ na ọdịiche nke igwe ikuku ka ukwuu. N'agbanyeghị nke ahụ, n'agbanyeghị ebe ha pụtara, ị ga-akpachara anya nke ukwuu, n'ihi na ikuku nwere ike ịbugharị 512km / h.
Ndị na-abụghị akwa: ha na-etolite n'okpuru Cumulus ma ọ bụ Cumulonimbus Cloud base. Ha anaghị eyi egwu dịka oke mmiri ozuzo, mana ị ka ga-anọrịrị, dịka ikuku nwere ike ịfe 116km / h.
Ebee ka ha hiwere?
Mmiri mmiri na Galicia. Foto - Twitter: @ lixo1956
Waterspouts bụ nnọọ nkịtị na ebe okpomọkụ, dị ka ụsọ oké osimiri ọwụwa anyanwụ nke United States. Ha puru na ndida Florida na igodo. Na, ee, enwere ike ịhụ ya na ọnọdụ ihu igwe, ọ bụ ezie na ha anaghị adịkarị. Nke kacha dị ọhụụ pụtara na Eprel 13, 2016, na Galicia (Spain), ebe otu n'ime ha rutere n'ụsọ osimiri Cabío, na A Pobra do Caramiñal, wee kpatara nnukwu mbibi na ụlọ mmanya.
Mmebi nke hoses nwere ike ịkpata
Ihe omume ndị a nwere ike imebi ọtụtụ ihe. Ha nwere ike imetụta ụgbọ mmiri, ụgbọ mmiri, na ndị nọ n'ụsọ oké osimiri. Yabụ, ọbụlagodi na ibi na mpaghara ebe ha na-anaghị adịkarị, ọ bụrụ na oke mmiri ozuzo na-abịa, ọ kacha mma ịghara ịga n'akụkụ osimiri, naanị ma ọ bụrụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe gbasara ihu igwe » Kedu ka esi esi kee mmiri mmiri?
Olileanya Perez dijo
ezi Ama, ị zọpụtara ọrụ m, ana m ekele gị nke ukwuu mana ọ nwere ntakịrị ozi na mmebi ma ọ bụ nsonaazụ ya, mana agbanyeghị na-ekele gị
Zaghachi Esperanza Perez